ukusebenza okuphezulu esilucwecwana butterfly valve - China Tianjin Tanggu TWT Valve
ukusebenza okuphezulu esilucwecwana butterfly valve
Design amazinga nezidingo GB / T12238 noma amazinga-API-609 Valve ukuhlolwa kuhambisana GB / T13927 noma ikhasimende izidingo zokuhlola. Side flange ejwayelekile ihlangabezana nezidingo GB / T9119 noma ASME B16.5. isakhiwo eside iyahlangabezana nezidingo elicacisiwe GB / T12221-2005 noma i-API-609. naphakathi Fluid: amanzi, amafutha, igesi Sebenzisa lokushisa: -29 ℃ ~ 450 ℃ Kusebenza ingcindezi: PN0.6 ~ 6.4MPa usayizi Kusebenza: DN50 ~ DN2000 Connection: flange uhlobo, ngocingo uhlobo, Welding uhlobo Ixhuma namazinga: GB, A .. .
Design amazinga nezidingo GB / T12238 noma i-API-609
amazinga Valve ukuhlolwa kuhambisana GB / T13927 noma ikhasimende izidingo zokuhlola.
Side flange ejwayelekile ihlangabezana nezidingo GB / T9119 noma ASME B16.5.
Isakhiwo eside iyahlangabezana nezidingo elicacisiwe GB / T12221-2005 noma i-API-609.
Kusebenza usayizi: DN50 ~ DN2000
Double ome njengeqanda isakhiwo design, ukugwema bafake ebusweni kubekwa uphawu, nokugcina ubuqotho seal inkonzo high ukuphila.
Design ebanzi engela esihlalweni ukugwema ngokucindezela futhi kulimaze esihlalweni valve futhi valve contact Friend, ukuhlinzeka eside ekuphileni inkonzo.
Ababili - esiteji okusezingeni eliphezulu - amandla stem isakhiwo ukuqinisekisa nokugcinwa lula, kabili isakhiwo ome njengeqanda kwenza yesondlo inthanethi ye esihlalweni futhi disc kuba lula futhi fast.
Yangaphakathi stem / disc drive ukugwema izikhonkwane noma imishudo ukufakwa kungase likhiqize izinhlobo ezingaphezu ukuvuza indlela.
- nezimo emvula indandatho ichopho umphini ihlinzeka aphelele zihlalo ingcindezi, has izinzuzo isakhiwo esilula kanye nesisindo ukukhanya hhayi kuphela, torque ukushayela incane, elula, okusheshayo, ukugeleza ezinhle olawula umsebenzi naseduze ukubekwa uphawu izici.
Previous: ukusebenza high flange double butterfly valve
Okulandelayo: Lug butterfly valve
Anticorrosion Butterfly Amaphayiphu
Butterfly valve Abakhiqizi
Butterfly valve Usebentisa
Stem enwetshiwe Butterfly valve
Okugcwele ujenga Butterfly valve
ngokugcwele Lug Butterfly Valve
ujenga Esilucwecwana Butterfly valve
Plastic Butterfly Amaphayiphu
Soft Isihlalo Butterfly valve
Esilucwecwana Uhlobo Butterfly valve
Esilucwecwana Uhlobo Sakaza Iron Butterfly valve
flange Double bakwazi ukubhekana nokuhlupheka ohlezi ibhotela ome njengeqanda ...
yensimbi Sakaza flange double butterfly valve